ကျွန်မကို ပစ်ထားတတ်တဲ့ ကျွန်မ ချစ်သူ – Shinyoon
ကျွန်မကို ပစ်ထားတတ်တဲ့ ကျွန်မ ချစ်သူ
ကျွန်မ ချစ်သူ ….
စပြီးချစ်ခဲ့တုန်းက …ကြင်နာတတ်ခဲ့သလောက် အခုကျတော့ အေးစက်သွားတာ ​သူ မဟုတ်တော့သလိုပဲ ။ ကျွန်မဆီ ဖုန်းလေးဆက်ဖို့ သေမလောက် ၀န်လေးတတ်တဲ့သူ ကျွန်မဟာ သူ့ဆီက ခေါ်လာမယ့်ဖုန်းသံကို မျှော်နေတတ်တဲ့ ​ကောင်မလေးမှန်း သူ လုံး၀မသိခဲ့ဘူး ။ သူကတော့ ဖုန်းတွေ မပြောပဲနဲ့လဲ နေနိုင်တယ် ကျွန်မသာ တွေးတွေးပြီး ၀မ်းနည်းရတာပါ ။
အစကတော့ … ကျွန်မကို အစစအရာရာ အလေးထားတယ်လို့ ထင်ခဲ့တာ။တကယ်တမ်းကျတော့ သူ့အတ္တတွေလောက် ကျွန်မကို မချစ်ခဲ့ဘူး ။ ဟိုမသွားရ ဒီမသွားရ ဒီလူနဲ့မပြောရ ဟိုလိုမလုပ်ရ … ဒါတွေဟာ သ၀န်တိုလို့ပါဆိုတဲ့ ခေါင်းစဥ်အောက် ဆွဲသွင်းလိုက်လို့ရတယ် ။ ကျွန်မမှာကျ အဲ့လို သ၀န်တိုပိုင်ခွင့်တွေ မရှိခဲ့ဘူး ။ စိတ်ပူလို့ ပြောခဲ့တဲ့အရာတွေတောင် သူ့အတွက် … နားပူစရာတွေသက်သက်ဖြစ်ခဲ့တယ် ။ ကျွန်မဟာ သူ့အတွက် အရာမရောက်ခဲ့ဘူး ။
အရင်က ကျွန်မက ဘယ်နေရာလဲလို့ မေးခဲ့ဖူးတယ် ။ အဲ့ဒီတုန်းက သူဖြေခဲ့ဖူးတာက မင်းက ငါ့အတွက်အရာရာပါတဲ့ ပြောတဲ့စကားတွေဟာ မဆုံးခဲ့မှန်းခုမှ သိတော့ … သူပြောတဲ့ အရာရာဆိုတဲ့အနောက်မှာ ကျွန်မဟာ အဲ့ဒီအရာရာတွေလောက် အလေးထားစရာမလိုဘူးလို့ ဆက်ပြီး ပြောချင်နေတဲ့ ပုံပါပဲ ။ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ပျော်ပါးတဲ့အခါ … သူကျွန်မကို မေ့ထားလိုက်တယ် … ဖုန်းတွေဆက်ဖို့နေနေသာသာ ဆက်တဲ့ဖုန်းတွေကိုတောင် ချပစ်ဖို့ ၀န်မလေးတော့ဘူး ။ ကျွန်မက အဲ့လို အရာရာရဲ့နောက်မှာပါ ။
ကြင်နာဖို့ထက် နာကျင်စရာတွေ ပေးဖို့လောက်ပဲ တွေးတော့တယ် ။ ရိုမန့်တစ်ဆန်ဖို့နေနေသာသာ ညတွေဟာ မငိုရရင်ပဲ ကျွန်မ ပျော်စရာတွေ ကောင်းနေပြီလို့ တွေးနေလောက်တဲ့ထိ ကျွန်မအပေါ် စာနာတာတွေလဲ မဲ့တယ် ။ ကျွန်မလွဲရင် သူ့အတွက် အရေးကြီးဆုံးအရာတွေပ​ဲရှိမှန်းသိခဲ့ရင် အစကတည်းက ကျွန်မ ရွေးခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး ။
ခုတော့ လွယ်လွယ်ကူကူလေး ချစ်ခဲ့တာမဟုတ်တော့ လွယ်လွယ်လေး လှည့်ထွက်ဖို့ခက်တယ် မက်လောက်စရာတွေ မရှိမှန်းသိရဲ့နဲ့တောင် သူ့အနားနေနေရုံက ကျွန်မ မက်လောက်တဲ့အရာပါ ။ ဒဏ်ရာတွေများနေရင်းနဲ့တောင် မနာတတ်တဲ့ စိတ်လဲ ခက်တယ် ။ တစ်နေ့တော့ ပြင်လာကောင်းပါရဲ့ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက် ရေးရေးလေးတော့ ထားတာပဲ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီနေ့တွေဟာ ကျွန်မ စိတ်တွေ မပျက်ခင် ရောက်လာပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းမိတယ် ။ ကျွန်မသူ့ကို ဂရုမစိုက်တော့ပဲ နေနိုင်သွားမှာ ကြောက်နေမိသေးတယ် ။
ကြၽန္မ ခ်စ္သူ ….
စၿပီးခ်စ္ခဲ့တုန္းက …ၾကင္နာတတ္ခဲ့သေလာက္ အခုက်ေတာ့ ေအးစက္သြားတာ ​သူ မဟုတ္ေတာ့သလိုပဲ ။ ကြၽန္မဆီ ဖုန္းေလးဆက္ဖို႔ ေသမေလာက္ ၀န္ေလးတတ္တဲ့သူ ကြၽန္မဟာ သူ႔ဆီက ေခၚလာမယ့္ဖုန္းသံကို ေမွ်ာ္ေနတတ္တဲ့ ​ေကာင္မေလးမွန္း သူ လုံး၀မသိခဲ့ဘူး ။ သူကေတာ့ ဖုန္းေတြ မေျပာပဲနဲ႔လဲ ေနႏိုင္တယ္ ကြၽန္မသာ ေတြးေတြးၿပီး ၀မ္းနည္းရတာပါ ။
အစကေတာ့ … ကြၽန္မကို အစစအရာရာ အေလးထားတယ္လို႔ ထင္ခဲ့တာ။တကယ္တမ္းက်ေတာ့ သူ႔အတၱေတြေလာက္ ကြၽန္မကို မခ်စ္ခဲ့ဘူး ။ ဟိုမသြားရ ဒီမသြားရ ဒီလူနဲ႔မေျပာရ ဟိုလိုမလုပ္ရ … ဒါေတြဟာ သ၀န္တိုလို႔ပါဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ ဆြဲသြင္းလိုက္လို႔ရတယ္ ။ ကြၽန္မမွာက် အဲ့လို သ၀န္တိုပိုင္ခြင့္ေတြ မရွိခဲ့ဘူး ။ စိတ္ပူလို႔ ေျပာခဲ့တဲ့အရာေတြေတာင္ သူ႔အတြက္ … နားပူစရာေတြသက္သက္ျဖစ္ခဲ့တယ္ ။ ကြၽန္မဟာ သူ႔အတြက္ အရာမေရာက္ခဲ့ဘူး ။
အရင္က ကြၽန္မက ဘယ္ေနရာလဲလို႔ ေမးခဲ့ဖူးတယ္ ။ အဲ့ဒီတုန္းက သူေျဖခဲ့ဖူးတာက မင္းက ငါ့အတြက္အရာရာပါတဲ့ ေျပာတဲ့စကားေတြဟာ မဆုံးခဲ့မွန္းခုမွ သိေတာ့ … သူေျပာတဲ့ အရာရာဆိုတဲ့အေနာက္မွာ ကြၽန္မဟာ အဲ့ဒီအရာရာေတြေလာက္ အေလးထားစရာမလိုဘူးလို႔ ဆက္ၿပီး ေျပာခ်င္ေနတဲ့ ပုံပါပဲ ။ အေပါင္းအသင္းေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ပါးတဲ့အခါ … သူကြၽန္မကို ေမ့ထားလိုက္တယ္ … ဖုန္းေတြဆက္ဖို႔ေနေနသာသာ ဆက္တဲ့ဖုန္းေတြကိုေတာင္ ခ်ပစ္ဖို႔ ၀န္မေလးေတာ့ဘူး ။ ကြၽန္မက အဲ့လို အရာရာရဲ႕ေနာက္မွာပါ ။
ၾကင္နာဖို႔ထက္ နာက်င္စရာေတြ ေပးဖို႔ေလာက္ပဲ ေတြးေတာ့တယ္ ။ ႐ိုမန္႔တစ္ဆန္ဖို႔ေနေနသာသာ ညေတြဟာ မငိုရရင္ပဲ ကြၽန္မ ေပ်ာ္စရာေတြ ေကာင္းေနၿပီလို႔ ေတြးေနေလာက္တဲ့ထိ ကြၽန္မအေပၚ စာနာတာေတြလဲ မဲ့တယ္ ။ ကြၽန္မလြဲရင္ သူ႔အတြက္ အေရးႀကီးဆုံးအရာေတြပ​ဲရွိမွန္းသိခဲ့ရင္ အစကတည္းက ကြၽန္မ ေ႐ြးခဲ့မွာမဟုတ္ဘူး ။
ခုေတာ့ လြယ္လြယ္ကူကူေလး ခ်စ္ခဲ့တာမဟုတ္ေတာ့ လြယ္လြယ္ေလး လွည့္ထြက္ဖို႔ခက္တယ္ မက္ေလာက္စရာေတြ မရွိမွန္းသိရဲ႕နဲ႔ေတာင္ သူ႔အနားေနေန႐ုံက ကြၽန္မ မက္ေလာက္တဲ့အရာပါ ။ ဒဏ္ရာေတြမ်ားေနရင္းနဲ႔ေတာင္ မနာတတ္တဲ့ စိတ္လဲ ခက္တယ္ ။ တစ္ေန႔ေတာ့ ျပင္လာေကာင္းပါရဲ႕ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရးေရးေလးေတာ့ ထားတာပဲ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီေန႔ေတြဟာ ကြၽန္မ စိတ္ေတြ မပ်က္ခင္ ေရာက္လာပါေစလို႔ပဲ ဆုေတာင္းမိတယ္ ။ ကြၽန္မသူ႔ကို ဂ႐ုမစိုက္ေတာ့ပဲ ေနႏိုင္သြားမွာ ေၾကာက္ေနမိေသးတယ္ ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ပြောင်းလဲသွားခြင်းမှာ အကြောင်းပြချက်တွေ အများကြီးရှိနေနိုင်ပါတယ်
သူပြောင်းလဲမလာရင် ကိုယ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါ ။